LA OGAADAY: Afar Sanadood Ka Hor Balantii Ay Real Madrid U Qaaday Eden Hazard Markii Uu Xataa Ronaldo Joogay Oo Hadda Ay Fulin Doonto. - Gool24.Net
LA OGAADAY: Afar Sanadood Ka Hor Balantii Ay Real Madrid U Qaaday Eden Hazard Markii Uu Xataa Ronaldo Joogay Oo Hadda Ay Fulin Doonto.
Real Madrid ayaa sanado badan ku soo kharash garaysay daawashada iyo qiimaynta Eden Hazard kaas oo ay ugu danbayn dhawaan si rasmi ah ugu guulaysteen saxiixiisa kadib markii ay 130 milyan yuro kula heshiiyeen Chelsea.
Laakiin waxaa la ogaaday kulan Real Madrid iyo dadka Eden Hazard ku xeeran dhex maray afar sanadood ka hor iyo waxyaabihii ay Madrid balan qaadka ugu sameeyeen xidiga reer Belgium taas oo hadda la hirgalin doono.
Waqtiga ay Real Madrid la kulantay wakiilada Eden Hazard ee ay arintan kala hadlayeen waxaa xaalad cajiib ah kooxdooda kaga jiray Cristiano Ronaldo balse waxaa u muuqday waxa ay maanta ku jiraan.
Wariyaha ay Eden Hazard isku dalka Belgium yihiin ee Kristof Terreur ayaa soo bandhigay kulan qarsoodi ahaa oo Real Madrid iyo wakiilada Hazard dhex maray iyo hal arin oo ay markaas Madrid u soo bandhigeen xidiga reer Belgium.
Wariye Kristof Terreur ayaa shaaciyay in sanadkii 2016 kii ay ay maamuka Madrid la kulmeen dadka Eden Hazard ka agdhow isla markaana waxay u balan qaadeen in uu noqonayo badalka tooska ah ee Cristiano Ronaldo kaas oo ay markaas u arkayeen in uu galayay watigiisi ugu danbeeyay Bernabeu.
Waxa kale oo uu Kristof Terreur cadeeyay in markaas Eden Hazard loo balan qaaday in uu buuxinayo booska weerarka bidix ee uu Chelsea uga ciyaarayay waana balan qaada afar sanadood kadib ay Madrid u filinayso Eden Hazard.
Eden Hazard ayaa hadda diyaar u ah in uu ka ciyaaro booskii weerarka bidix ee uu Cristiano Ronaldo taariikhda kaga soo sameeyay Real Madrid waxaana sidoo kale loo gacan galinayaa isla lambarkii Ronaldo ee No.7 ka.
Wariyaha reer Belgium ee Kristof Terreur oo ka hadlaya halka uu Eden Hazard uga ciyaari doono Real Madrid iyo saamaynta kulankii 2016 kii ayaa yidhi: “Anigu waxaan filayaa in isagu uu ka ciyaari doono bidixda, sababtoo ah waxaan ogaa kulan dhex maray Real Madrid iyo dadka Hazard sanadkii 2016 kii”.
“Halkaas oo ay isaga u sharaxeen in ay isaga u arkeen badalka waqiga dheer ee Cristiano Roanldo oo garabka bidix ka ciyaarayay, waana halka uu aas aas ahaan uga ciyaarayay Chelsea”.
“Kaasi waxa uu ahaa qorshahooda marka dib loogu laabto, laakiin halkaas iyagu kumay riixin in ay la soo wareegaan, waxayna bilaabantay xili ciyaareedkii la soo dhaafay”. ayuu Kristof Terreur hadalkiisa sii raaciyay.
SIDOO KALE AKHRISO: Miyuu Saxeexa Taariikhda Arsenal Ugu Qaalisan Ee Nicolas Pepe Kusoo Bilaaban Doonaa Kulanka Burnley Ee Berrito? Unai Emery Ayaa Ka Jawaab Celiyay.
Sida uu Kristof Terreur cadeeyay, maamulka Real Madrid ayaa badalka Cristiano Ronaldo waxay Eden Hazard u calaamadsadeen sanadkii 2016 kii inkasta oo uu waqtigaasi ahaa xiliyadii uu Ronaldo ugu fiicnaa.
Si kastaba ha ahaatee, ugu danbayn Real Madrid ayaa badlaka Ronaldo ka dhigan doonta Eden Hazard inkasta oo ayna suurtogal ahayn in uu buuxiyo heerka gool dhalintiisii waalida ahayd.